विदेशी श्रमिकको रोजगार गन्तव्य बन्दै नेपाल, चालू आर्थिक वर्षको ९ महिनामा कति आए ? - Samudrapari.com
विदेशी श्रमिकको रोजगार गन्तव्य बन्दै नेपाल, चालू आर्थिक वर्षको ९ महिनामा कति आए ?
काठमाडौं – नेपालमा श्रम स्वीकृति लिएर काम गर्न आउने विदेशी कामदारको सङ्ख्या बढ्दो छ । तर, नेपालमै रोजगारीको अवसर नपाएको भन्दै विदेश जाने कामदारको सङ्ख्या भने वार्षिक ६ लाख हाराहारी छ । पछिल्लो २ वर्ष विश्वभर फैलिएको कोभिड-१९ सङ्क्रमणका कारण प्रभावित भएको श्रम बजार फेरि लयमा आउन थालेको छ ।
योसँगै नेपालबाट वैदेशिक रोजगारमा जाने बढेका छन् भने नेपालमा रोजगारीका लागि आउने विदेशीको सङ्ख्या पनि बढेको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ९ महिनामा ७७१ जना विदेशीले नेपालमा काम गर्न श्रम स्वीकृति लिएको श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले जनाएको छ । आ.व. २०७७र७८ को सोही अवधिमा ६७६ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए ।
यो ९ महिनाको अवधिमा श्रम स्वीकृति नवीकरण गर्नेको सङ्ख्या भने घटेको छ । चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि चैतसम्म ८१५ जनाले श्रम नवीकरण गरेका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ९७७ जनाले नवीकरण गरेको विभागका महानिर्देशक उमाकान्त आचार्यले जानकारी दिए । कोरोना महामारी सामान्य भएसँगै नेपालमा सञ्चालन भइरहेका ठूला परियोजनामा नयाँ श्रम स्वीकृति लिने विदेशीको सङ्ख्या बढेको उनको भनाई छ ।
श्रम स्वीकृति लिएर नेपालमा काम गर्नेमध्ये ९० प्रतिशत उच्च सीपयुक्त प्राविधिक छन् । नेपालमा रोजगारीका लागि ९६ देशका नागरिकले श्रम स्वीकृति लिएकामध्ये सबैभन्दा बढी चिनियाँ रहेको श्रम विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । नेपालमा कार्यालय सञ्चालन गरेका विदेशी विमान सेवा कम्पनी, इलेक्ट्रोनिक कम्पनी, खानेपानी, नहर तथा हाइड्रोपावर कम्पनीमा धेरै विदेशी कार्यरत छन् ।
प्रकाशित समय: २१:१७:३८